डाक्टरले कोरोना लागेको भनेपछि, एक युवकको हेर्दाहेर्दै तड्पीएर मृत्यु – Jagaran Nepal
डाक्टरले कोरोना लागेको भनेपछि, एक युवकको हेर्दाहेर्दै तड्पीएर मृत्यु
धनुषा । देशमा कोभिड उपचारका नाममा १० अर्बभन्दा बढी खर्च भए पनि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि कसरी खेलबाड भइरहेको छ भन्ने कठोर उदाहरण धनुषामा देखिएको छ । भारतमा रोजगारी गुमेपछि भोकै ज्यान जाने डरले मातृभूमि फर्किएका १६ वर्षीय किशोरको उपचार नपाएर निधन भएको छ । जब कि उनलाई कोभिड थिएन भन्ने पुष्टि भएको छ ।
राजुको समूह १४ जेठमा गाउँ आइपुगेको थियो, उनीहरूलाई नगरपालिकाले लौवाखोरमा सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । भारतबाट आएकाको कोरोना परीक्षण गर्ने भने पनि उनीहरूलाई विना परीक्षण क्वारेन्टाइनमा राखियो । ‘१० दिनपछि अर्थात् २४ जेठमा मात्र नमुना संकलन गरियो । एक–दुई दिनपछि राजुलाई पखाला लाग्यो,’ चेन्नईबाट सँगै आएका र सँगै बसेका अरुण सदा भन्छन्, ‘पखाला किन लाग्यो भनेर सोधखोज भएन, सीधै कोरोना हो भनेर आइसोलेसनमा पठाइयो ।’
पेट दुखेर राजु आइसोलेसनमा तड्पिरहेका थिए, तर उनलाई कोभिड लागेको हो कि होइन भन्ने रिपोर्ट दुई सातासम्म पनि आएन । ‘ल्याब र जनशक्ति कम छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, प्रदेशको प्रयोगशालामा आज पनि ६ हजार ८१३ नमुना थन्किएका छन्, योभन्दा छिटो दिन सकिने अवस्था नै थिएन,’ प्रयोगशालाका एक अधिकारीले भने । उता कोभिड परीक्षण र उपचारका लागि राज्यको सम्पूर्ण स्रोत र शक्ति परिचालन गरेको राज्यले दुई सातासम्म रिपोर्ट नदिँदा राजुका आफन्त ठूलो मानसिक यातनाबाट गुज्रिए । राजु आफ्नै पीडाबाट छटपटाइरहेका थिए ।
आइसोलेसनमा सँगै भएका सिराहाका एक युवाले रेकर्ड गरेको भिडियोमा असह्य पीडाले राजु तड्पिरहेको अवस्थामा देखिन्छन् । बेडमा अडिन नसकेर उनी भुइँमा पनि छट्पटाइरहेका छन्, सँगै बसेका साथीहरूले ‘राजु, राजु’ भनेर उनलाई सान्त्वना दिन खोजेका छन् । तर, उनलाई के भयो भनेर सोधखोज गर्न स्वास्थ्यकर्मी कोही पनि आएका छैनन् । उनी तड्पिरहेको वेला ‘पेनकि’लर’ दिने वा उनलाई लठ्ठ पार्ने इन्जेक्सन लगाइदिने प्रयास पनि भएको छैन ।
कोरोना हो भनेर आइसोलेसनमा राखिएकोले परिवारले राजुको हेरचाह पनि गर्न पाएनन् । ‘हामी नजिक जान पाइएन, तर भित्रबाट जानकारी आइरहेको थियो, औषधि–उपचार नै पाएको छैन, रोइरहेको छ भन्ने सुनेर यता घरमा रुवावासी हुन्थ्यो, तर गरिब रोएको सरकारले सुनेन,’ पिता अशेश्वरले भने । नमुना संकलन भएको १४ दिनपछि रिपोर्ट आयो, कोभिड होइन भनेर । तर, राजु र परिवार खुसी हुन पाएनन्, किनकि अस्पतालको चरम उपेक्षाले उनी धेरै गलिसकेका थिए । स्वास्थ्य बिगिँ्रदै गएपछि ९ असारको बिहान करिब ४ बजे उनको निधन भयो ।
‘नमुना त पहिले नै संकलन भएको रहेछ, उनलाई २८ जेठमा यो आइसोलेसनमा ल्याइएको थियो, त्यसको १० दिनपछि मात्र रिपोर्ट आयो, उनलाई कोभिड छैन भन्ने रिपोर्ट आएको थियो,’ आइसोलेसन वार्डका इन्चार्ज डा. जामुन सिंहले भने । अस्पताल जाँदा नगरपालिकाको टिपरमा गएका राजुको शव भने एम्बुलेन्समा राखेर घर पु¥याइयो । छोराको अन्त्येष्टि भएको छ, तर घरको दुःखको महाभारत बल्ल सुरु भएको छ । गहभरि आँशु भएका पिता अशेश्वरले भने, ‘मेरा छोराको रिपोर्ट छिटो आएको भए उपचार राम्रो पाउँथ्यो, आज ज्यान गुमाउनुपर्दैनथ्यो, बरु सडकमा भीख मागेर खाँदै उतै बसेको भए बाँच्थ्यो होला, दशा लागेर देश आएछ ।’
‘कोरोना होइन भन्ने रिपोर्ट आए पनि रिपोर्ट सही हो भन्नेमा डाक्टर र नर्स नै ढुक्क थिएनन्, त्यसैले उनीहरू नजिक आएनन्,’ राजुसँगै आइसोलेसनमा बसेका अरुण सदाको भनाइ छ । यता, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका आइसोलेसन वार्डका इन्चार्ज डा. सिंहले ¥यापिड टेस्टमा कोरोना देखिएकोले त्यसैका आधारमा उनको हेरचाह गरिएको बताए । ‘आरडिटी चेक गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखियो, त्यसैले त्यसैको आधारमा हामीले उपचार अघि बढायौँ, तर पिसिआर रिपोर्ट नै समयमा आएन ।
त्यसैले कोरोना नै होला भनेर उपचार गर्नुको विकल्प थिएन,’ उनले भने, ‘तर, ढिलो गरी पुष्टि भयो, उनलाई कोरोना होइन, मेङ्गे इन्फलाइटिक्स भएको रहेछ, त्यही रोगले उनको निधन भयो ।’ यो विषयमा अस्पतालको दोष नभएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनाको रिपोर्ट समयमा आएन, तर स्वास्थ्य अवस्था धेरै नै बिग्रिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि जानकारी गराएका हौँ, अस्पतालले गर्ने सबै काम गरेका हौँ, तर उनलाई जोगाउन सकिएन ।’ हदिश खुद्दारले नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको यो समाचार लेखेका छन् ।